I-villa yabucala enedama kunye nendawo ye-spa eTallinn - I-Airbnb
I-villa yabucala enedama kunye nendawo ye-spa eTallinn
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguJelena
Ubutofotofo bendlu yabucala iMerirahu enedama labucala kunye nendawo ye-spa ibekwe eTallinn, kwindawo yabucala yeMerirahu, iimitha ezingama-200 ukusuka elwandle. Vula iMyuziyam yoMoya - 2.3 km. Izibuko leYacht eneendawo zokutyela, iivenkile, ibhola yevoli, ibhola ekhatywayo kunye neendawo zekonsathi - 900m.
3 amagumbi okulala, igumbi lokuhlala / i-atrium enendawo yomlilo yegesi, i-countercurrent pool, i-sauna, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, umatshini wokuhlamba, amagumbi okuhlambela ayi-3, i-terraces emi-2 enophahla olubuyiselwayo kunye nokufudumeza, i-balcony, igaraji, ukhuseleko.
Indlu yabucala-villa (imigangatho emi-2) kwindawo evaliweyo. Ulwandle lwasendle 200m ukusuka kwivilla. I-villa ijikelezwe yigadi ye-linden grove (iqhakaza ngoJulayi), i-apula, i-jasmine kunye ne-lilac (iqhakaza ngoJuni), i-roses kunye ne-wild rose (iqhakaza lonke ihlobo kunye nekwindla). Kukho nemithi emininzi ye-coniferous - i-arborvitae kunye ne-spruces.
Amagumbi okulala ama-3 aneebhedi ezimbini ze-oki, oomatrasi obutofotofo kunye nezixhobo ze-pastel ezivela kubavelisi ababalaseleyo base-Estonia.
Igumbi lokuhlala elibanzi kunye nefenitshala / i-atrium enendawo enkulu ejikeleze indawo yomlilo yegesi kunye nendawo yokutyela eyahlukileyo, iisilingi ezibonisiweyo kunye neendonga ezibonisiweyo kumgangatho we-2, kunye neglasi (ukuya kumgangatho) eludongeni kumgangatho wokuqala. Ubuninzi bokukhanya kwasekuqaleni, okudibaniswe nezibuko kunye nomlilo, kudala umtsalane okhethekileyo (ngokukodwa ngokuhlwa). I-wiring eyenziwe ye-7.1 ye-speaker system (eneesokethi emgangathweni) ye-8-channel audio yokujongwa, njengeediski ze-Blu-ray. Kwakhona, i-wiring yenziwa kunye nazo zonke iintambo eziyimfuneko ze-hdmi ukudibanisa iprojekti (umzekelo, endaweni yeTV).
Kumgangatho ngamnye kukho i-ventilation enyanzelekileyo eyahlukileyo (kunye neepaneli zokulawula kwiindonga).
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-induction hob kunye ne-oveni, i-dishwasher, ifriji kunye nekhabhathi yewayini, izitya eziyimfuneko kubantu abayi-12 kunye neentlobo ezahlukeneyo zeeglasi kunye neekomityi.
Kukho igumbi lokuhlambela elahlukileyo (umatshini wokuhlamba, isinki, njl.njl.)
Inkqubo yokhuseleko (ngokwahlukileyo kumgangatho ngamnye) kunye nenkqubo yokujonga ividiyo yeekhamera ze-16, intambo yesantya esiphezulu kunye ne-Intanethi engenazintambo, i-cable TV kunye ne-LCD TV 55 ", umdlali wevidiyo (i-blu-ray) kunye nenkqubo yesithethi sokudlala umculo kwifowuni ephathekayo. kukho kwakhona intambo (inthanethi TV) uqhagamshelo ngqo on the ithala le-2nd floor (40 m2) ukubukela umabonakude okanye projektha uqhagamshelo ngqo esitratweni.
Igaraji yeemoto ezi-2 kunye nokupaka iimoto ezi-3 ngaphakathi kwe-villa. Ukwahlula umoya wegaraji. Ukufudumeza ukuphuma kwesitrato kwigaraji ukusuka kwi-icing (ebusika).
Iimitha ezi-2 eziphangaleleyo (i-40 m2 kunye ne-14 m2) ezinophahla oluzenzekelayo olubuyiselwayo kunye nokufudumeza kwangaphandle, ifenitshala yegadi (iitafile ezi-2 kunye nezitulo ezili-12) kunye ne-grill yokutshisa iinkuni. Zombini i-terraces zinokufikeleleka zombini ukusuka kwisitalato nangaphakathi kwendlu.
1 iisofa eziyi-, umatrasi ompontshwayo oyi- 1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1
Iintsuku eziyi-7 e Tallinn
I-villa ibekwe eTallinn, kwindawo yabucala yeMerirahu, ejikelezwe lulwandle, ihlathi kunye nendalo. Apha uya kuziva umanyano olupheleleyo kunye nendalo kwaye ujabulele intuthuzelo kunye noyilo olukhethekileyo.
Ulwandle lwasendle luphambi kwe-villa, i-200 m.
I-Estonian Open Air Museum (yeyesibini inomtsalane eTallinn) ikumgama oziikhilomitha eziyi-2.3 (ekufuphi neMerirahu, ecaleni konxweme olufanayo).
Izibuko yeyacht (eyakhiwe ngo-2019) ineendawo zokutyela, iivenkile, ibhola yevoli kunye nebala lebhola ekhatywayo, irenti yezothutho zamanzi kunye nezixhobo zemidlalo, kunye nekhefi yasehlotyeni kunye nendawo yekonsathi yi-900 m (kumda wesithili saseMerirahu, ecaleni kwendlela. unxweme efanayo).
Sihlala sincedisa iindwendwe zethu ngexesha lokuhlala kwabo kwi-villa.
Unokuhlala unxibelelana nathi nge-whatsapp, viber okanye ngefowuni ephathwayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tallinn